Ny fampiharana calisthenics 8 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny fampiharana calisthenics 8 tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fahasalamana ara-batana dia zavatra iray tsy maintsy tandremanay sy tazomintsika amin'ny ambaratonga tsara indrindra foana, izay mihatra amin'ny fahasalamana ara-tsaina ihany koa. Izany dia mitondra tombony mazava ho antsika izay misy fiatraikany tsara amin'ny fiainantsika sy ny bika aman'endrika misy antsika, fa noho izany dia mila manao fanatanjahan-tena matetika isika; manimba ny fanaovana na inona na inona amin'ny sehatra ara-batana.
Ny fahalalana ny fomba fanatanjahan-tena dia zava-dehibe ihany koa. Tsy dia be loatra ny fampiasana azy io amin'ny ratsy, ary mba hialana amin'ny vokany rehetra mety hitranga amintsika (toy ny ratra sy ny tomany hozatra ohatra) dia asehonay izao fanangonana izay hahitanao ny fampiharana kalisthenika tsara indrindra ho an'ny telefaona Android, mba hahafahanao manao hetsika sy fanazaran-tena tsara avy any an-tranonao ary tsy mandeha amin'ny gym mba hijanonana ho salama sy ho salama ara-batana.
Alohan'ny lisitr'ireo rindranasa dia tsy maintsy takatrao izany Calisthenics, ho an'ireo izay tsy mahalala, dia andiam-panatanjahan-tena sy fampihetseham-batana izay atao amin'ny vatanao ihany, tsy mila mampiasa milina na lanjany manokana ho azy. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, miaraka amin'ireto fampiharana calisthenics manaraka ireto izay tanisainay etsy ambany, tsy mila zavatra hafa ianao fa ny fanatanjahan-tena, ary ny tsara indrindra dia ny ahafahanao manao izany avy any an-tranonao na amin'ny toerana hafa, ary amin'ny fotoana tianao.
1 Calisteniapp - Calisthenics sy fampiofanana an-dalambe
2 App amin'ny fampiharana an-dalambe
4 Caliverse - Calisthenics & Fitness amin'ny vatana
5 Madbarz - Fanatanjahan-tena amin'ny vatana
6 Fitness vatana
7 FitTap avy amin'i DAREBEE
8 Fitloop: Fitness ara-batana
Calisteniapp - Calisthenics sy fampiofanana an-dalambe
Atombotsika miaraka amin'ny Calisteniapp, iray amin'ireo fampiharana fampiharana nampidinina be indrindra tao amin'ny Play Store. Izy io dia manana katalaogin'ny fampihetseham-batana, hetsika ary fotoam-pampiofanana, izay azo ahitsy ho an'ny mpampiasa vao manomboka, na mpanelanelana na mandroso, arakaraka ny toetran'ny olona voalohany. Raha toa ianao ka olona manomboka amin'ny rangotra mankany amin'ny olona manam-potoana sy traikefa eo amin'ny tontolon'ny fanazaran-tena dia natao ho anao ity fampiharana ity.
Natao izy io mba hamintinana tanteraka ny vondrona hozatra, mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny famaritana sy famoahana volo. Ankoatr'izay, manampy amin'ny fampitomboana ny fanoherana ny vatana sy ny fampisehoana ara-batana ho an'ny hetsika hafa sy fanatanjahan-tena izany. Afaka misafidy fampihetseham-batana maro ianao izay ampidirina maimaim-poana, na ataovy amin'ny mpamorona fanazaran-tena manokana.
Miaraka amin'ny Calisteniapp dia tsy vitan'ny hoe manana fanazaran-tena, fanazaran-tena ary fampihetseham-batana betsaka ianao, fa koa Azonao atao koa ny mampiasa azy io hanombatombanana ny fandrosoanao amin'ny faran'ny fivoriana tsirairay, izay manampy amin'ny fanarahana ny fandrosoana.
Raha manana fotoana voafetra ianao hanatanterahana ny fanaonao, dia misy lahasa misy fandaharam-potoana tafiditra ao ary manampy anao handamina tsara kokoa ny tenanao hahita toerana hanaovana fanazaran-tena.
Ary farany, raha tsy fantatrao tsara ny fomba fanaovana fanazaran-tena tsirairay aseho amin'ny fampiharana (satria misy ny sasany izay mety ho somary sarotra), Calisteniapp dia hanondro mazava ny fomba hanaovana azy ireo, miaraka amin'ny lahatsoratra fanabeazana sy ny fanoharana didactic.
Calisteniapp - Fampiofanana an-dalambe
App amin'ny fampiharana an-dalambe
Street Workout App dia rindrambaiko kalisthenika hafa tena tsara izay misy repertoire lehibe fanazaran-tena amin'ny fampiofanana, fivoriana, fampihetseham-batana ary hetsika feno ho an'ireo vao manomboka sy ho an'ireo mpampiasa efa mandroso.
Izy io dia tonga miaraka amin'ny fanamby izay hitsapana ny tanjaky ny vatanao ary hanampy anao mandoro tavy, mihinana kaloria haingana, ary mamaritra ary mampitombo haingana ny hozatra, raha mbola atao tsy tapaka sy tsara izy ireo, izay tsy olana noho ny sary naseho tamin'ny fampihetseham-batana tsirairay ho an'ny fanatanterahana tsara.
Angamba ny hany zavatra ratsy momba ity fampiharana ity dia amin'ny teny Anglisy, saingy tsy manakana ny fampiasana azy mora foana izany, satria mifandray be izy io ary voalamina tsara ny endriny, mba hahafahan'ny tsirairay mampiasa azy hanatsara ny toe-batany. .
Ho an'ireo atleta mitady hampitombo sy hamaritra ny hozatra manerana ny vatana, Thenics dia safidy mahaliana iray hafa izay manana drafitra fanatanjahan-tena ho an'ireo mpampiasa sy atleta amin'ny sehatra rehetra.
Na mbola tsy nanao fanatanjahan-tena mihitsy ianao tamin'ny fiainanao na olon-tiana sarotra maty ianao, ity fampiharana calisthenics ity dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra hitanao izao ao amin'ny Play Store, miaraka amin'ny naoty 4.7-kintana mifototra amin'ny fampidinana mihoatra ny iray tapitrisa ary hevitra an'arivony maro be izay manasongadina ny tombony azo avy amin'izany.
Raha tsy manana hevitra lehibe momba ny zavatra hatao sy ny toerana hanombohana ianao dia tsy misy atahorana; dia omena drafitra fanofanana izay mitarika anao isan'andro sy amin'ny fotoana rehetra, miaraka amin'ny torolàlana maneho izay mampiseho aminao ny fomba fanaovana asa tsirairay. Ankoatry ny fampisehoana fotsiny ireo fanazaran-tena hatao, dia miaraka amina fanafanafana sy fanazaran-tena mba hialana amin'ny karazana ratra mandritra ny fotoam-pivoriana mafy mavesatra amin'ny vatana.
Etsy ankilany, miadana ny fanazaran-tena, ka mandroso miandalana amin'ny fivoaran'ny mpampiasa. Ho setrin'izany, dia miteraka firaketana sy fanaraha-maso ny fivoarana isan'andro isan'andro.
Caliverse - Calisthenics & Fitness amin'ny vatana
Ity fampiharana calisthenics ity dia tsy iray amin'ireo malaza indrindra, kanefa izy io dia iray amin'ireo tsara indrindra, ary ny naoty 4.7-kintana manamarina azy. Ary ilay Caliverse dia rindrambaiko iray izay mampanantena anao valiny nefa tsy mila fanampiana, lanja, milina na gym. Ny lanjan'ny vatanao sy ny torolàlana asehony amin'ny torolàlana, fivoriana ary drafitra fanatanjahan-tena ihany no ilainao.
Tsy hahita fotsiny ianao drafitra fanatanjahan-tena efa nomanina, fa azonao atao ihany koa ny mamorona ny anao manokana ary mampanjifa azy ireo araka izay itiavanao azy, mba hiasa ireo faritra misy hozatra izay heverinao fa mety indrindra amin'ny toe-batanao. Ny repertoire an'i Caliverse dia misy fampihetseham-batana maherin'ny 300 sy fampihetseham-batana 100 miaraka amin'ny horonan-tsary sy fanazavana ara-teknika momba ny fanaovana azy ireo.
Manana famporisihana ihany koa izy io: afaka mandray anjara amin'ny fanamby ianao isam-bolana ary miatrika mpampiasa hafa mba hampitaha ny valiny ary ho mpandresy. Ny zavatra mahaliana koa dia ny fiasa miaraka amin'ny tambajotra sosialy, izay ahafahanao mizara ny valiny sy mahazo hevitra mahasoa, ary koa manome azy ireo, ankoatry ny zavatra hafa.
Madbarz - Fanatanjahan-tena amin'ny vatana
Tonga lafatra ho an'ny faritra hozatra toy ny kibo, lamosina sy tongotra, ary koa ny sandry. Madbarz - Bodyweight Workouts dia miasa amin'ny vatana iray manontolo, miaraka amin'ny fampihetseham-batana tsy misy lanjany ho an'ireo mpampiasa tsy manam-pahaizana ary manam-pahaizana, satria misy sary amin'ny antsipiriany momba ny fomba fanatanterahana ny tsirairay amin'ireo fampiharana sy torolàlana fampiofanana maro ananan'izy ireo.
Madbarz dia tsy mifantoka amin'ny fampitomboana anao hozatra ary hamaritana ny hozatrao, fa koa amin'ny mandoro tavy, satria maro amin'ireo fanazaran-tena no manambatra ny aerobika amin'ny anaerobika, manolotra kardio be dia be izay manampy ny olona manana olana amin'ny hatavezina hampihena ny lanjan'ny vatana amin'ny fomba mahasalama ary tsy mila lanja, na dia manana fahazarana amin'ny fanaovana ao amin'ny Gym.
Amin'ity fampiharana calisthenics ity dia afaka mamorona sy mitahiry ireo fanazaran-tena fanazaran-tena ataonao ianao. Inona koa, mamela anao hisafidy amin'ny fampihetseham-batana sy fotoam-pivoriana marobe amin'ny faharetana na vondrona hozatra manokana, jereo ireo fampianarana an-tsary manazava momba ny hetsika tsirairay momba ny fanatanterahana azy tsara, manaova fanamby isan-kerinandro ho famporisihana ary jereo ny fanazaran-tena fanaon'ny mpampiasa hafa, ankoatry ny zavatra hafa.
Bodyweight Fitness dia fampiharana iray hafa tsara ho an'ireo tia calisthenika sy ireo izay te-hanomboka eto amin'ity tontolo ity. Tsy mamela anao hanana tanjaka fotsiny izy io, fa, ankoatra ny fahazoana mahazo hozatra, manampy anao hampitombo ny fahalalahana sy hanatsara ny fahasalamana.
Ny fahasarotan'ireo fanazaran-tena dia azo ovaina, arakaraka ny haavon'ny mpampiasa, izay mety manomboka amin'ny vao manomboka ka hatramin'ny mandroso, mba hifanaraka amin'ny toe-batana mitovy amin'izany ny tsirairay.
Ity fampiharana calisthenics ity dia misy fiasa toa ny timer, log de ligne, fanarahana ny fandrosoana miaraka amin'ny tabilao sy ny tantara amin'ny antsipiriany, sns.
Bodyweight Fitness dia iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra amin'ny karazany, miaraka amina an'arivony an'arivony ary manana naoty 4.7 kintana tena tsara mifototra amin'ny hevitra an'arivony. Izy io dia, tsy isalasalana, iray amin'ireo tsara indrindra, ary izany no antony tanisainay azy ao anatin'ity fanangonana ity.
FitTap avy amin'i DAREBEE
Izy io dia iray amin'ireo fampiharana calisthenika maivana indrindra hita ao amin'ny Play Store izao, milanja eo ho eo. 13 MB, ary izany dia satria iray amin'ireo tsotra indrindra. Na izany aza, tsy izany no antony tsy anolorana zavatra be dia be amin'ny haavo fanazaran-tena sy fanazaran-tena.
Ity fampiharana ity dia manana fanazaran-tena marobe izay azonao atao mifanesy tsy misy fijanonana, miaraka amin'ny sary izay mitarika anao amin'ny fizotrany, izay ara-potoana arakaraka ny toe-batanao. Miasa ny vatana iray manontolo, manomboka amin'ny torso, ny lamosina ary ny sandry hatramin'ny tongotra sy zanak'omby.
Fitloop: Fitness ara-batana
Farany, manana Fitloop izahay: Bodyweigh Fitness, fampiharana kalisthenika tsara tarehy izay misy fanao fanazaran-tena maro azo isafidianana, arakaraka ny zavatra ilainao sy takinao. Izy io dia miaraka amin'ny asan'ny timer sy stopwatch handraisana ny faharetan'ny fotoam-pivoriana.
Etsy ankilany, mamela anao hizara ny fampihetseham-batanao amin'ireo mpampiasa hafa ianao ary hitahiry / hitahiry ireo andiany rehetra sy famerimberenana fanazaran-tena izay vitanao aorian'ny fizarana fampiofanana tsirairay. Tsotra ihany koa ny interface-ny, koa tsy sarotra ny mampiasa azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana calisthenics 8 tsara indrindra ho an'ny Android
[VIDEO] Smash Legends no lalao Android tsara indrindra navoaka tamin'ny volana martsa lasa teo